Iindaba-Imibala emibini ePhantsi kokuKhanya oku-3+3w okuBuyelwe kwakhona kwi-KTV okanye iiBhara okanye ukusetyenziswa koSapho
Umzekelo Uguqulelo oluhlaziyiweyo
Umbala okhanyayo Emhlophe + eluhlaza okanye ebomvu okanye eluhlaza okwesibhakabhaka okanye etyheli
Iwaranti Iminyaka emi-3
Umthombo wokukhanya: I-LED enamandla aphezulu
Uphawu lweChip: I-Epistar chip
Amandla alinganisiweyo: 1W okanye 3W
Izakhelo zokuSebenza: 50 ~ 60Hz
I-Luminous Flux: 100-110LM (1W); 200lm(3W)
Umbala: Obomvu/Mthubi/Oluhlaza/Oluhlaza/Mhlophe(Mhlophe Bumhlophe NgeNdalo)/Ubushushu obumhlophe/bumhlophe obubandayo
Jonga i-engile: 15degree (ukuba uthanda 30degree okanye 45degree okanye 60degree, nceda ushiye umyalezo. Siya kukwenzela)
Ubushushu bokusebenza: -20 C ~ +45 C
Ubushushu bokugcina: -20 C~ +80 C
Ubomi: iiyure ezingama-50000
Iphakheji ebandakanya: 5 * ukukhanya kwekhabhinethi ye-LED
Imo yombala omhlophe: Ilingana nezibane zephaneli eziqhelekileyo
Imowudi yombala oluhlaza okwesibhakabhaka: Iblue inokudala umoya ngakumbi
Imowudi eluhlaza okwesibhakabhaka + emhlophe: Iindlela ezintathu zinokutshintshwa nangaliphi na ixesha
I-lumen ephezulu ye-SMD 2835 ye-LED ye-chip: Iintlobo ze-chip eziphezulu ze-CRI zinokukhethwa, Ukukhanya okuphezulu okuluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokukhanya okumhlophe kwe-chip ye-LED, i-PCB efanelekileyo yokutshatyalaliswa kobushushu.
7W/15W/20W/30W COB Phantsi Isibane esineMibala emibini esetyenziselwa uSapho
CCT 4000K kunye 6500K imibala emibini
Izinto eziphathekayo Izindlu zeAluminiyam + isigqubuthelo seglasi
Umphezulu weringi yiplastiki: Umgangatho olungileyo, uthintele ukwaphuka
Umzimba wesibane osemgangathweni ophezulu: Ukutshatyalaliswa kobushushu ngokukhawuleza kunye nokuqina
I-wick yomgangatho ophezulu: I-chip ye-LED enombala ophezulu, ukonga amandla, ubomi obude
Isigqubuthelo sangasemva yingxubevange yealuminiyam: Iqhiya elikumgangatho ophezulu wokutyibilika, likhuselekile kwaye liqinile, akoyiki umhlwa.
Umthombo wokukhanya: Amandla aphezulu e-COB led chip
2.5 intshi, 4inch, 5inch, 6inch, 8inch, 10inch LED ukukhanya phantsi
Iihotele, iiklabhu, iivenkile ezinkulu, iivenkile, iiofisi, iindawo zokuhlala, amashishini, njl.
I-Aina-4 Technologies (Shanghai) Co., Ltd. yinkampani yabucala elinganiselweyo ebhaliswe eShanghai, eChina. Isebenza ngokukodwa kwi-R&D, ukuyila, ukwenza, kunye nokuthengisa imithombo yokukhanya okukhupha ukukhanya kunye nezibane zokukhanyisa. Lishishini elenziwe ziinkampani ezine (4) ezingoovulindlela, ezibeka izixhobo zazo kunye ukuze zivelise iimveliso kunye neenkonzo ezidala uzinzo kungekuphela nje kokusingqongileyo, kodwa noqoqosho kunye noluntu inkampani ekhula nayo.
Ikomkhulu e Shanghai
Uphando & iziko loPhuhliso elise Shanghai
Iziko lokuthengisa eliseBeijing
Ukuncediswa liqela leengcali ezineminyaka engaphezu kweshumi (10) yamava kushishino lokukhanyisa
Sineqela lethu le-R & D. Unako ukuyila okanye ukuphucula ukukhanya ngokusekelwe kwiimfuno zabathengi
Sinemizila eyahlukeneyo yokuvelisa ukukhanya okuhlukeneyo. Inokwenza ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza kunabanye
Isebe lethu lokuhlola umgangatho linokunceda abathengi ukuba bajonge zonke izinto ngaphambi kokuthunyelwa
Sinokunikezela ngenkonzo ye-OEM. Abathengi banokusebenzisa uphawu lwabo.
I-1, siyifektri, hayi inkampani yokurhweba
2, sinabasebenzi abangaphezu kwe-100, kuquka umlawuli wekhwalithi we-5 kunye neenjineli ezili-10. Ke abaphathi bethu abaphezulu bancamathela ukubaluleka kulawulo lomgangatho kunye ne-R & D rhoqo
Ixesha lentlawulo ye-1: idiphozithi ye-TT emva komyalelo oqinisekisiweyo, ibhalansi emva kwempahla ekulungeleyo ngaphambi kokuthunyelwa okanye i-L / C, okanye imanyano yasentshona yemali encinci
2 Ixesha lokukhokela: ngokwesiqhelo kwi-odolo enkulu malunga neentsuku ezili-10-20
3 ISampuli yoMgaqo-nkqubo: Iisampuli zihlala zikhona kwimodeli nganye. Iisampulu zinokulungela kwiintsuku ezi-3-7 emva kokuba intlawulo ifunyenwe
Ixesha lokulungiselela into lijikeleze iintsuku ezili-10-15. Zonke izinto ziya kuvavanywa phambi kokuba zithunyelwe.
Zonke iimpahla zithunyelwa ukusuka eTshayina okwangoku.
Yonke iodolo iya kuthunyelwa nge-DHL, TNT, FedEx, okanye Ngolwandle, ngomoya njl njl. Ixesha eliqikelelweyo lokufika liyi-5-10 iintsuku nge-express, iintsuku ze-7-10 ngomoya okanye iintsuku ze-10-60 ngolwandle.
I-Rm606, iSakhiwo sesi-9, iNombolo ye-198, iChangcui yokuTshintsha indlela yaseBeijing eChina.102200
NgoMvulo-ngoLwesihlanu 9am ukuya 6pm
Umbuzo: Ungasifumana njani?
A: I-imeyile yethu: sales@aina-4.com okanye WhatsApp/Wechat/Skype +86 15989493560
Umbuzo: Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
A: Emva kokuqinisekiswa kwexabiso, unokufuna iisampuli ukujonga. Umrhumo weisampulu owuhlawuleyo uya kubuyiselwa kuwe xa kukho iiodolo ezisesikweni inyathelo nenyathelo.
Q: Ndingalifumana njani ixabiso lakho?
A: Siza kukuthumelela ikowuti kwiiyure ezingama-24 emva kokuba ufumene umbuzo wakho. Ukuba ufuna ixabiso ngokungxamisekileyo, ungasifumana nanini na nge whatsapp okanye wechat okanye viber
Umbuzo: Lithini ixesha lakho lokuhambisa
A: Ngeisampulu, ngokuqhelekileyo kuya kuthatha malunga neentsuku ezi-5. Ngomyalelo oqhelekileyo uya kuba malunga neentsuku ezili-10-15
Umbuzo: Kuthekani ngemigaqo yorhwebo?
A: Samkela EXW, FOB Shenzhen okanye Shanghai, DDU okanye DDP. Unokukhetha eyona ndlela ifanelekileyo okanye enexabiso eliphantsi kuwe.
Umbuzo: Ngaba unokongeza ilogo yethu kwiimveliso?
A: Ewe, sinokunikezela ngenkonzo yokongeza uphawu lwabathengi.
Umbuzo: Kutheni ukhetha thina?
IMPENDULO: Sinemizi-mveliso emithathu kwiindawo ezahlukeneyo ezijolise kudidi olunye olwahlukileyo lwezibane. Singakunika ukhetho oluninzi lokukhanyisa.
Sineofisi yokuthengisa eyahlukileyo, inokukunika iinkonzo ezimangalisayo.